China Manual Pipe Threading Lathe fekitori uye vagadziri | Oturn
Pipe yekumonera lathe yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa neminda yemafuta, geology, kuchera, makemikari, kudiridza kwekurima uye drainage indasitiri. Inokodzera kugadziriswa kwemajoini epombi, pombi yepombi
1. Iyi yakajairwa pombi yekunamatira lathe dhizaini nyowani.
2. Iyo mubhedha yakasarudzika-nhatu-nhurikidzwa madziro mamiriro, uye rwekumashure madziro akarongedzwa ne12 ° mutserendende. Iyo yekufambisa njanji upamhi hwemubhedha ndeye 550mm. Iyo yakanyanya-odhiyo yakadzimwa uye yakanyatsogadziriswa kuti ive nechokwadi chekurongeka uye hupenyu hwehupenyu hwemuchina.
3. Iyo yakazara giya bhokisi mhando mhando chokurukisa yuniti, iwo wekumusoro bhokisi nderewewewo wekukanda chimiro, panzvimbo pekusimudzira mat.
4. Iko kushandiswa kwekudzima chaiko kukuya magiya uye emhando yepamusoro mabheyari inova nechokwadi chekuti muchina ruzha rwakanaka.
5. Musoro mukuru wemusoro unotora yakasimba yekunze kutenderera kutonhodza lubrication system, iyo isingori chete inoderedza kukwidza kwekushisa kweiyo shaft huru, asi zvakare zvinobudirira inochengeta bhokisi remusoro rakachena uye rakazorwa.
6. Terevhizheni inotungamira yakasungirirwa neYT bhandi rakapfava kunatsiridza hutungamiriri hwakajeka uye kunyatsoita kwechishina chishandiso, uye nekunyatso kugadzirisa hupenyu hwebasa remushini chishandiso.
7. Iyo huru yekutyaira giya inogadzirwa neShenyang Machine Turu Boka kuona kuti ruzha rwechishina chishandiso rwakanaka.
Ichi chishandiso chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya mukugadziriswa kwe hydraulic cylinders, refu shaft zvikamu uye dzakasiyana zvikamu.
Max.kutendeuka dhayamita yemuchina muviri
Max.kutendeuka hupamhi hweMudziyo Wekushandisa
500 Chinyorwa matatu-shaya chuck
Kunonyanyisa kureba kwekufamba kwechigaro
Spindle centre kune Chishandiso yekuisa datum
Chidimbu chikamu size
Tailstock sleeve dhayamita
Tailstock sleeve yekufamba
Taper yemuswe muswe taper gomba
Yekupedzisira kusuduruka kwemuswe wemuswe
Pashure: Vatatu Chiso Kutendeuka Lathe